Ukuxhasa iSatechi nge-iPad, kubalulekile | IPhone iindaba
ULuis Padilla | 26/04/2021 10:00 | iPad Air, iPad Pro
I-iPad iya isiba luncedo kwidesktop yethu ngenxa yezinto ezintsha ezibandakanya iApple kwi-iPadOS, kunye ukulungiselela le nkxaso ilungileyo njengale evela kuSatechi ibalulekile edibanisa uyilo kunye nokusebenza.
I-iPad, kwimeko yam i-Pro Pro, isisixhobo sam esifanelekileyo sokuhamba, kodwa kancinci kancinci ikwafumana indawo xa ndisekhaya kwidesika yam, zombini ukutya umxholo wemultimedia nokundinceda emsebenzini wam nekhompyuter. . Kwaye oko kubhetele ukusebenzisa indawo ethile eyonyusayo kwaye ikuvumela ukuba wenze i-angle ejijekileyo ngaphezulu kweKhibhodi yoMlingo. Konke oku kunye nokunye okuninzi onokukwenza ngale ndawo yokuma yealuminium ivela eSatechi.
Yenziwe ngealuminiyam yonke, ukuziva ngathi ngaphandle kwebhokisi akunakuba ngcono. Ingqele, yomelele, ibambe nzima ... umgangatho wayo wokwakha uphezulu kakhulu, kwaye igcwele iinkcukacha ezincinci ezibonisa ukuba izinto ezininzi zithathelwe ingqalelo xa uyilwa. Into yokuqala ebonakalayo ngaphandle kwayo, kodwa iphakame kakhulu (phantse isiqingatha sekhilogremu) ngexabiso lesiseko. Obu bunzima bunegalelo kuzinzo lwesitendi, ekuvumela ukuba ubeke i-iPhone nakweyiphi na indawo oyifunayo ngaphandle kokuhambisa imilimitha enye.. Iihenjisi ezimbini zestendi zikuvumela ukuba uphakamise okanye wehlise iseti, kwaye uhlengahlengise i-engile yokuthambeka kwe-iPad, enika uluhlu olupheleleyo lokuhamba: indawo ephezulu yokujonga umxholo wemultimedia, okanye ngokuthe ngqo kwinqanaba ledesika ukuze ukwazi bhala ngePensile yeApple.
Ndakhe ndathetha ngaphambili malunga neenkcukacha eziphucula inkxaso. Kuqala sifumana iindawo ezininzi ezigqunywe ngesilicone ethambileyo ukukhusela umphezulu we-iPad yethu xa siyibeka kwinkxaso. Ikogutyungelwe nangomxholo kwisiseko sayo, ukukhusela umphezulu apho sibeka khona, kunye nokulungisa ukuze ungatyibiliki kuwo. Kwaye sinemingxunya emibini esinokuthi sidlulise kuyo intambo yokutshaja, esivumela ukuba siphinde sihlaziye i-iPad yethu ngokuthe nkqo nangokuthe nkqo, ngaphandle kwengxaki.
Xa ubeka i-iPad kwindawo yokuma, uvakalelo lokhuseleko luphezulu kakhulu. Iihenjisi zomelele ngokwaneleyo ukuba nje ukuba usete indawo oyifunayo, ayisayi kushukuma isiqingatha semilimitha. Ngapha koko, ukuba unokubeka ingxaki kwinkxaso, ngamanye amaxesha udinga izandla zozibini ukuze ukwazi ukuyithetha. Ndikhetha oku ukuba ndicothise okanye ndinikezele kancinci kancinci ... kum, isigqibo esenziwe nguSatechi kule meko sichanekile.
indawo yokuma ikuvumela ukuba ube nezikhundla zokusetyenziswa okwahlukileyo. Kulungile ukonwabela umxholo wemultimedia, kodwa ikwavumela ibeke ecaleni kweliso lakho eliphambili ukuze usebenzise umsebenzi weSidecar nge-macOS, ejika i-iPad yakho ibe liliso lesibini, nazo zonke izibonelelo ezibandakanya oku. Kwaye ndifumana ezona ndawo zisezantsi zikhululekile ukuba ndikwazi ukubhala okanye ukuzoba ngePensile ye-Apple. Kwaye ukuba ufuna ukusebenzisa ikhibhodi yangaphandle kunye nempuku, ukuba ne-iPad yakho kule ndawo kukuvumela ukuba uyibeke kwindawo efanelekileyo yokusebenza nayo.
Ukusebenza ngokuma kweSatechi aluminium stand kukuvumela ukuba kusetyenziswe ngeendlela ezininzi: ngekhibhodi yangaphandle kunye nempuku, ukubhala ngePensile ye-Apple, ukonwabele umxholo wemultimedia, okanye ukuyisebenzisa njengokongeza iliso kwi-Mac yakho ngenxa yeSidecar. Yongeza kolo mgangatho wokwakha ubalaseleyo kunye nozinzo olothusayo ngokwenene, isiphumo kukufikelela phantse kuwo nawuphi na umsebenzisi we-iPad kwidesika yakhe. Ixabiso layo yi- $ 55 kwiAmazon (unxibelelwano)
Ithunyelwe nge: 26 April 2021
Utshintsho lokugqibela: 25 April 2021
Uzinzo kuso nasiphi na isikhundla
Ukuhlala kumiswe kwindawo oyifunayo
Ukuhamba kwehenjisi kunzima
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPad » iPad Pro » ISatechi imele i-iPad, ibalulekile
Umngcipheko we-AirDrop ubeka idatha yakho emngciphekweni
Inkonzo yobhaliso yeSpotify ayizukugcina nayiphi na ikhomishini